ထသက ကို ဖုန်းခေါတာ မကိုင် ဘူး ။ ဆုံးကုန်ပြီလား မသိဘူး တချက် ကြည့်ပေးကြပါအုံး
Answer : ဖုန်းပျက်နေတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
How to apply REX system? What's the requirement?
Answer : https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_home.jsp?Lang=en www.commerce.gov.mm Office Building No.3, MOC , Nay Pyi Taw. ph : 067-408233 fax : 067-408321 No.228-240 , Strand Road, Yangon. ph : 01-377600 e-mail : [email protected]
E Token အကြောင်းစုံစုံလင်လင်သိချင်လို့ပါရှင် ဘယ်မှာလေ့လာလို့ရနိုင်ပါသလဲရှင်
Answer : ယခုအခါ E Token အား အသုံးပြုခြင်း မရှိတော့ဘဲ Google Aunthenicator Application အား အသုံးပြုမည့် ဖုန်းတွင် Install ပြုလုပ်ပြီး ထသကနှင့် ချိတ်ဆက် Scan ဖတ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ယင်း Google Aunthenicator Application နှင့် ပတ်သက်သည့် User Guide အား Myanmartradenet Website တွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရူနိုင်ပြီး အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အလီဘာဘာမှကုနျပစ်စညျးတငျသှငျးခငျြပါတယျခငျဗြာ။ တငျသှငျးခှငျ့ရဖို့ ဘယျအခကျြမြားလုပျဆောငျရနျလိုအပျကွောငျး ရှငျးပွပေးစလေိုပါတယျခငျဗြာ ။ကြေးဇူးတငျပါတယျ။
Answer : ph : 01-245855 သွင်းကုန်ဌာနသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Registration Expired ဖြစ်သားလို့ online က နေ extension ပြန်လျှောက်လို့ ရလား MOC ကို လာရမှာလား
Answer : online ကနေလျောက်လို့မရသေးပါဘူးရှင့် MOC ကိုလာရမှာပါ
I TC card ဘလိုြောကျရလဲဗြ
Answer : နယ်စခန်းများတွင်သာလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်
ယူနီကုတျ ရိုကျ လို့ရလား
Answer : ရပါတယ်။
Back to Back CO ဆိုတာ ဘယ်လို CO မျိုပါလဲ
Answer : 01376057 ကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
Kanyin Face & Short Core Veneer ကို export licence လျှောက်ရင် kg နဲ့ဘဲလျှောက်လို့ရတာလားရှင့်။ Form ai မှာ လိုင်စင်က
USD ကိုထည့်လို့မရဘူးလားရှင့်၊ED မှာလည်းပါတယ် Licence က USD ပါဘဲရှင့်၊ H.S code ကိုဘယ်ကသိရမလဲရှင့်။
Answer : 01 376057 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
COSMETIC ကို IMPORT FORM Eခံစားချင်လို့ဘာတွေလိုအပ်လည်းသိချင်လို့ပါရှင့်?
Answer : ph : 01-376057 CO ဌာနသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား လက်လီလက်ကားရောင်းချခွင့်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ရင် ဘာတွေလိုအပ်သလဲသိချင်လို့ပါ။
Answer : ကုန်သွယ်ရေးတွင် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွ့်သာဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ရှင့်
gsp နဲ့ rexကဘယ်ကဝင်လျှောက်ရတာလဲ
ED 2စောင် ဖြင့် AK 1 စောင်လျှောက်၍ ရပါသလား
Answer : 01 376057 ကိူ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်
ထသက (ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်) ကို အွန်လိုင်းကနေလျှောက်ဖို့ "ထသကမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရန်" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါတယ်ရှင့်။ အဲဒီမှာ နားမလည်တာများ မေးပါရစေနော်။
၁) Myanmar TradeNet Website wGif Member ရဲ့အောက်မှာ ဖောင့်မမှန်လို့ ဘာလဲဆိုတာဖတ်လို့မရပါဘူးရှင်။ ဒါကြောင့် ဘာကိုရွေးရမှန်းမသိပါ။
၂) Business Type မှာ private ကုမဏီဆိုရင် ဘာကိုရွေးရပါမလဲရှင်။
၃) attachment လုပ်ပေးရမယ့် ဖိုင် ၃ ခုတွေ့ပါတယ်။ ဘာတွေကို attach လုပ်ပေးရပါမလဲရှင်။
Answer : ထသကမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရန် ကို ကုန်သွယ်ရေးရုံးတွင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင့် 010388294 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်
DIRECTOR LIST ဘယ်လိုရှာရမလဲ?
Answer : Tradenet member၀င်ပြီးသူများမှာ HTK Search နေရာတွင် ပသက နံပါတ်ရိုက်ထားပြီး List Director ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင့်
Vietnam နိုင်ငံအတွက် GSP ကို ဘယ် Form လျှောက်ရပါသလဲ
ဥပမာ China ဆို Japan ဆို Form A အဲ့ဒီလိုမျိုး
Answer : 01 376057ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်
Aug3ရက် နေ့အထိ ထသက နောက်ဆုံးလို့သိရပါတယ်
co date နဲ့ ထကသ သက်တမ်းတိုးပြီးပါပြီ
Director ပြောင်းကျန်နေလို့ ၃ရက်နေ့ကျော် မှ ပြောင်းရင်ဒဏ်ကြေးထိနိုင်လားဗျာ
Answer : မထိပါဘူးရှင့်
ထသက လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးချင်လို့ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲရှင့်
Answer : ph : 01-388294 ထသကဌာနသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
on line လိုင်လျောက်လို. ရတဲ. H.S တွေဘယ်မှာကြည့် ရမလဲး
Answer : www.commerce.gov.mm ရှိ ဥပ ဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအောက်ရှိ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ အောက်တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရူနိုင်ပါသည်။